मधेशमा चुनाबी पारो रन्किदै,कुन-कुन पार्टीका नेता पुगे मधेश,कहाँ-कहाँ के हुदैछ? « हाम्रो ईकोनोमी
मधेशमा चुनाबी पारो रन्किदै,कुन-कुन पार्टीका नेता पुगे मधेश,कहाँ-कहाँ के हुदैछ?
आगामी असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा हुने तेस्रो चरणको स्थानीय चुनावका लागि आ-आफ्ना दलका उम्मेदवारलाई जिताउन विभिन्न दलका शीर्ष नेता नै मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । मुख्य दल तथा मधेस केन्द्रित दलले तीव्र पारेको घरदैलो केन्द्रित प्रचार अभियानमा सम्बन्धित दलका शीर्ष नेता नै भोट माग्दै हिंडिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमलगायतका दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार भोट माग्न मतदाताको घर आँगनमा पुगिरहेका हुन् । निर्वाचन नजिकिदै गर्दा ८ वटै जिल्लाका १ सय ३६ नगर तथा गाउँपालिकाका उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा कार्यकर्ताको झुण्ड बोकेर भोट माग्न व्यस्त छन् । मतदाताका हातहातमा पार्टीका पर्चा तथा घोषणापत्र थमाउँदै उनीहरू विकास निर्माणका सपना बाँडिरहेका छन् ।
एक दशअघि भएको ‘मधेस आन्दोलन’ बाट स्थापित मधेसकेन्द्रित दल मधेसमै चुनाव भएकाले आफ्नो अस्तित्व जोगाउने लडाइँमा छन् भने ठूला दलहरू आप्mनो ‘अखडा’ जमाउने कसरतमा छन् ।
कांग्रेसलाई भोट माग्न प्रधानमन्त्री जाने
नेपाली कांग्रेसको प्रचार अभियानका लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेता विमलेन्द्र निधिलगायतका शीर्ष नेता प्रदेश नम्बर दुईमा खटिएका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत पार्टीका उम्मेदवारका लागि भोट माग्न मधेसमा जाने तयारीमा रहेको कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘शीर्षस्थ नेता चुनावी प्रचारमा मधेसमै हुनुहुन्छ, सभापति तथा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि जाने कार्यक्रम छ ।’
कांग्रेसले अन्य शीर्ष नेतासँगै सांसद, केन्द्रीय सदस्य तथा र भ्रातृ संगठनलाई खटाएर चुनावीसभा भन्दा पनि घरदैलो अभियानलाई जोड दिएको छ । कांग्रेसबाट सरकारमा गएका केही मन्त्री तथा राज्यमन्त्री समेत चुनावी आचार संहिताविपरीत सरकारी सेवा सुविधान प्रयोग गर्दै भोट माग्न हिँडेका छन् ।
ओली मधेस झर्दै
मुख्य विपक्षी दल एमालेका शीर्ष नेता पनि लामो समययता प्रदेश नम्बर २ मै छन् । यसअघि भएका स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको एमालेले २ नम्बर प्रदेशमा पनि एक नम्बरको पार्टी बन्ने लक्ष्यसहित शीर्ष नेतालाई चुनावी अभियानमा खटाएको छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेलसहितका नेता चुनावी अभियानका क्रममा मधेसमै रहेका सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि निर्वाचन हुने पर्सादेखि सप्तरीसम्मका ८ वटा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा हुने चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्न जाने भट्टराईले जनाए । उनले भने, ‘घरदैलो कार्यक्रम र चुनावी सभा दुवैलाई सँगसँगै लगेका छौं, अध्यक्षज्यू समेतको सहभागिता हुने गरी चुनावीसभा तय भएका छन्, अध्यक्षबाहेकका अरु शीर्ष नेता मधेसमै हुनुहुन्छ ।’
मधेसमा दाहालको दौडधूप
यस्तै माओवादी केन्द्रका पनि अध्यक्षसहितका शीर्ष नेता तराईमा केन्द्रित छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल केही दिनयता मधेसमै छन् । शनिबार बारा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा आयोजना भएका चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका उनीसँगै अरु शीर्ष नेता पनि सहभागी थिए । नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, मणि थापा, उर्मिला अर्याललगायत नेता प्रदेश नम्बर २ का विभिन्न जिल्लामा घरदैलो तथा चुनावी सभामा खटिएका सो पार्टीकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् ।
‘केही दिनयता अध्यक्षज्यू तथा शीर्ष नेताहरू मधेसमै हुनुहन्छ, बाँकी नेता पनि मधेस झर्ने तयारीमा हुनुुहुन्छ,’ उनले भनिन् ।
राजपा बल्ल मधेसमा
यसअघि दुई चरणको निर्वाचनमा सहभागी नभएको राष्ट्रिय जनता पार्टीका शीर्ष नेता शनिबार मधेस गएका छन् । मधेसकेन्द्रित दल भए पनि नेताहरू राजधानी केन्द्रित हुँदै आएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको सो दलका अध्यक्षमण्डलका अधिकांश सदस्य शनिबार प्रदेश नम्बर २ तर्फ गएका हुन् ।
अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारीलगायतका नेता शनिबारै मधेस पुगेर विभिन्न चुनावी सभालाई सम्बोधन गरिसकेका महासचिव केशव झाले जानकारी दिए । केही दिनअघि राजधानीमा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका उनीहरूले अब मतदातालाई आफ्ना एजेण्डा बुझाउन मधेस झरेको बताएका छन् ।
यस्तै संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लालबाबु राउतलगायतका नेता मधेसमै रहेका सो दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक डा शिवजी यादवले जानकारी दिए । अशोक राईलगायतका नेता मधेस झर्ने तयारीमा छन् ।
उता नेपाल फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदार वीरगन्जबाट शनिबार राजधानी फर्किएका छन् । सो दलका अन्य नेता चुनावी अभियानमा मधेसमै छन् । चाँडै नै गच्छदार पुनः मधेस झर्ने कार्यक्रम रहेको सो दलले जनाएको छ ।
प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच नै
मधेसमा निर्वाचन भए पनि मधेस केन्द्रित दलभन्दा पनि पहिलो र दोस्रो चरणमा जस्तै मधेसमा पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने धेरैको विश्लेषण छ । मधेसका आठ जिल्लामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राजपा नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिकलगायत साना दल प्रतिस्पर्धामा छन् । साथै केही स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत छन् ।
मधेसमा पहिलो संविधान सभामा माओवादी केन्द्र पहिलो, एमाले दोस्रो र कांग्रेस तेस्रो स्थानमा थिए तर दोस्रो संविधान सभा चुनावमा माओवादी तेस्रो स्थानमा झरेको थियो भने कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो स्थानमा कायम रहृयो । मधेसमा यसपटक मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेकै हुने छ।